Dalka Kenya oo ay Asaniya iyo Kooxda Jwxo-shiil, Udbahoodii ka Qaateen – Rasaasa News
Dalka Kenya oo ay Asaniya iyo Kooxda Jwxo-shiil, Udbahoodii ka Qaateen
Aug 30, 2011 Dalka Kenya oo ay Asaniya iyo Kooxdii Jwxo-shiil, Udbahooda ka Qaateen
“Hawraar la raaciyo raad ma laha beentuye taladaan la ruugin waa lagu rafaadaa.” Adigaa ii lahaa iyo adigaa igu raacay iyo eed ruuxba ruux saaro ayey ku idlaatay taladii cawaaqib xumada ku dambaysay ee Jwxo-shiil, ku dhisay maamulkii Asaniya ee uu ku hoos dhuumanayey.
Jwxo-shiil, kolkii uu arkay in uu gacantiisa ku burburiyey ONLF, kama uusan garaabin khaladaadkii uu galay ee waxaa uu qaaday talaabooyin hor leh isaga oo dhibaatadii kula gal gashay dalka dariska ah ee Kenya.
Jwxo-shiil, waxaa uu bilaabay talaabooyin aar gudasho ah oo uu si hoose ugu laynayo dadka asalkoodu uu ka soo jeedo gabalka Ogaden ee degan dalka Kenya, kuwaas oo ka soo horjeeday arimaha uu ku jiro. Intii uu bilaabay dhibaatooyinka hoos u dilka ah dhamaadkii bishii December ee sanadkii 2010, waxaa dalka Kenya sababtiisa loogu dilay dad aan ka yarayn 10 ruux, oo kuligood si qarsoon loo dilay.
Waxaa kale oo uu Jwxo-shiil, abuuray maamul galbaleed aan jirin oo la yidhaahdo Asaaniya, kaas oo uu u dhisay gabalada Jubooyinka fadhina ka dhigtay Nairobi. Maamulkaas oo samaystay ciidamo intooda badan ay yihiin kooxda Jwxo-shiil, oo doonayey in ay halkaas dib isugu abaabulaan.
Arintaas waxaa si cad uga hor yimid dadweynaha Somaliyeed ee ku dhaqan gabalada Jubooyinka, oo aad u yaqaan dhibaatooyinka kooxda Jwxo-shiil. Iyaga oo ay ku xasuustaan dadweynaha gabalada Jubooyinku dagaalkii ka dhacay Tuulada Cali-boolay oo ka tirsan degmada Dhoobley sanadkii 2009.
Warar xog ogaal ah oo aanu ka helayno dalka Kenya ayaa sheegaya in maamulkii Asaaniya iyo kooxdii Jwxo-shiil ee ku hoos gabanaysay ay kabahooda ka qaateen dalka Kenya. Magaalada Nairobi iyo Garrissa oo ay ku lahaayeen taageerayaal badan ayaa hada u eg in taageerayaashaasi ay dhinac iska dhigeen xiisihii ay u hayeen kooxda iyo maamulka Asaaniya.
Wararku waxay intaas ku darayaan in madaxweynihii maamulka Asaniya oo ay quusi ka muuqato uu dib ugu laabtay dalka Faransiiska oo uu kolkii hore ka yimid. Waxaana la sheegayaa in uu halkaas ku xidhay hamigii siyaasadeed ee ay ka dambaysay kooxda Jwxo-shiil. Masuulku waxa uu yeeli doono lama ogga maadaama oo hore sumcad ugu lahaa ummada Somaliyeed, waxayna u egtay in dad uu wax ka maqlo ay kula taliyeen in uu iskaga dhex baxo.
Wararku waxay intaas ku darayaan in isaga iyo masuuliyiinta kooxda Jwxo-shiil, ay iswaydaarsadeen hadalo kulul, iyaga oo uu ku eedeeyey in ay iyagu ka dameeyeen talada lagu dhisay Asaaniya. Talaabadaas uu masuulku ku dhisay maamulka Asaaniya ayaa hoos u dhigtay sumcadii uu ku dhex lahaa guud ahaan ummada Somaliyeed.
Fikirka lagu dhisay Asaaniya waxaa uu bilowday sanadkii 2009, ka dib dagaalkii ka dhacay Cali-buulay iyo ka hor imaadkii dadweynaha Somalida Ogadeeniya kooxda Jwxo-shiil. Waxayna xubno ka soo jeeda gabalada Jubooyinka oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, soo jeediyeen sidii kooxda Jwxo-shiil, saldhig uga heli lahayd gabalada Jubooyinka oo ay degan yihiin ehelka gabalka Ogaden.
Fikirkaas oo ay tijaabadiisii kowaad noqotay dagaalkii Cali-boolaay, ayaa dhinaca kale la iska tusay in la sameeyo maamul maqaar saar ah oo markan dambe noqday kan eegga kala tagay ee Asaaniya.
Xubno laga soo amaahday gabalka Gedo oo hore dambiyo uga galay dadweynaha ku nool gabalada Jubooyinka kana tirsan maamulka Asaaniya ayaa la sheegay in ay ka baxsadeen degmada Dhoobley, ka dib kolkii uu socon waayey maamulkii Asaaniya.
Isku soo duub oo waxaad moodaa in ay nabadi dib ugu soo noqon doonto gabalada Jubooyinka, mar hadii ay ka dhex baxeen ururadii siyaasadeed ee qaybinayey dadka gabalka u dhashay, waxaana la filayaa in si sahal ah ururka Al shabaana looga saari doono degaankaas.
Bishaaro Muslimiinta Aduunkow Meel Aad Joogtaanba, Kuna Ciid Caafimaad San
Xubno ka mid ah Mucaaradka Ethiopia oo la Xidhay